10 Ụlọ elu kacha mma n'ụwa niile | Save A Train
Home > Travel Europe > 10 Ụlọ elu kacha mma n'ụwa niile
Zụọnụ Travel China, Train Travel France, Ụgbọ oloko njem Japan, Zụọnụ njem Russia, Ingbọ ologo Spain, Train Travel UK, Ụgbọ njem USA, Travel Europe
Na-arị elu na mbara igwe, ndị a 10 skyscrapers kacha mma n'ụwa niile bụ ihe osise nke ndị na-ese ụkpụrụ ụlọ kacha mma n'ụwa. Na-agwakọta ihe ndị ga-eme n'ọdịnihu, na-adigide na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ atụmatụ, ndị a 10 ụlọ ndị mara mma bụkwa ụfọdụ n'ime akara ngosi a kacha eleta n'ụwa niile.
1. Ụlọ elu kacha mma n'ụwa niile: The Shard
306 mita ogologo, Ụlọ elu Shard bụ skyscraper kacha amata na London. na kacha mma ikiri ikpo okwu na London, ị nwere ike ịhụ ọmarịcha mbara igwe obodo site n'elu ụlọ elu ụlọ elu. The ikiri ikpo okwu bụ 244 mita ma na-enye echiche ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ n'akụkụ ọ bụla nke London.
Meghere 2003, Shard na-adọta ndị ọbịa si n'akụkụ ụwa niile. Ọtụtụ n'ihi na ụkpụrụ ụlọ pụrụ iche pụtara n'etiti nnukwu ụlọ elu niile dị n'ụwa. Nhazi Shard nwere iberibe iko na emebere ya ka ọ bụrụ ihe nkedo nke iko, enwere 11,000 iko iko na owuwu Shard. Ya mere, mgbe na London ọ bara uru nleta, yana nri abalị ọdịda anyanwụ dị ịtụnanya na ụlọ nri Shard n'elu ala 31-33, nke kachasị na UK.
2. Ụlọ elu kacha mma n'ụwa niile: Ụlọ elu Evolution Moscow
246 mita ogologo, Ụlọ elu Evolution na-agbagharị agbagharị na Moscow bụ otu n'ime ụlọ elu na-adọrọ mmasị na ụwa. Ụlọ elu mara mma na-achịkwa mpaghara azụmahịa nke Moscow na Moscow City ma na-eleghara Osimiri Moscow anya. Na ọdụ ụgbọ oloko, nnukwu ụlọ ahịa, ụlọ ọrụ, na ebe ndụ ndụ, na Ụlọ Evolution bụ otu n'ime ebe nkiri kacha eleta na Moscow.
Ihe owuwu ụkpụrụ ụlọ na-atụ uche ma na-atụ egwu, na-eme ka Evolution bụrụ otu n'ime ebe kacha dị ịtụnanya ileta na Russia. Ya mere, ọ dịghị mkpa ịsị na skyscraper Russia nwere ọtụtụ foto njem gburugburu ụwa ma bụrụ isi iyi nke nṅomi maka ndị na-ese ụkpụrụ ụlọ na ndị injinia n'ụwa nile..
3. Ụlọ elu kacha mma n'ụwa niile: Ụlọ Elu Ọchịchị
Ụlọ ụlọ ọrụ kacha ewu ewu n'ụwa, Ụlọ Alaeze Ukwu State kemgbe 1931. Ewubere ihe nchacha New York a ma ama na 1920 n'ọsọ iji wuo ụlọ elu kachasị elu n'ụwa.. Ụlọ Alaeze Ukwu State meriri n'ọsọ ahụ mgbe ndị na-ese ụkpụrụ ụlọ bụ Raskob na Smith haziri ụlọ elu dị egwu nke na-achịkwa mbara igwe Manhattan. 381 mita.
Owuwu Alaeze Ukwu bụ otu n'ime akara ngosi New York ga-ahụrịrị. Site n'ala nke 38th, ị nwere ike ịnabata ọwụwa anyanwụ ọnụ na obodo na-adịghị ehi ụra. Na echiche nke Central Park, Fifth Avenue ruo Times Square, echiche si Empire State Building bụ agaghị echefu echefu.
4. Ụlọ elu Shanghai
Ụlọ elu nke abụọ kachasị ogologo n'ụwa, Ụlọ elu Shanghai ruru 632 mita. Na-achị mbara igwe Shanghai na-adọrọ adọrọ, Ụlọ elu Shanghai nwere ikpo okwu nlele kachasị elu n'ụwa na-enye echiche nke Shanghai n'afọ niile.
Ihe ndị ọzọ pụrụ iche gụnyere ihe facade iko, ya na elu na-efegharị efegharị, na otu n'ime ihe ndị na-adọrọ mmasị bụ oghere ime ụlọ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Na mgbakwunye na nhazi akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, e mere ụlọ elu ahụ ka ọ bụrụ obodo n'ime onwe ya, hotel, oghere mkpọsa, ụlọ ọrụ, na oghere ndị ọbịa maka ọha. Shanghai Tower abụghị naanị otu n'ime 10 kacha mma skyscrapers n'ụwa nile, ma ọ bụkwa nke kasị ukwuu, na ike ịnabata 16,000 ndị mmadụ.
Na-achị skyline Hong Kong, Ụlọ akụ nke China bụ otu n'ime ụlọ elu kachasị dị ịrịba ama na China. na 367 mita, Ụlọ elu nke China bụ otu n'ime ụlọ elu kachasị elu n'ụwa niile na ụlọ a ma ama na etiti Hong Kong.. N'akụkụ dị nkọ na atụmatụ triangular na mpụta, Bank of China ga-eme ka ị na-ekiri ruo ọtụtụ awa na njedebe.
Ebe ọtụtụ ndị ọbịa na Hong Kong na-ahụ ụlọ elu a pụrụ iche, e nwere ole na ole na-enweghị mmasị. Ihe kpatara ya bụ njiri mara ọdịiche BOC na nke ọzọ mara mma ụlọ na China. Akụkụ dị nkọ na X, bụ akara ọjọọ na Feng Shui. Otú ọ dị, ihe ọjọọ ọjọọ nwere ike ime adịghị egbochi ndị njem na-enwe mmasị na ịma mma ụlọ a kwa ụbọchị.
Otu n'ime 10 kasị mma skyscrapers n'ụwa, bụ ebe ezumike. Marina Sands chere Marina Bay ihu, na ụlọ oriri na ọṅụṅụ, a cha cha, ihe nkiri, n'ụlọ elu atọ, jikọtara ya na SkyPark ogologo 340-mita. Na mgbakwunye, mgbagwoju kachasị ịtụnanya nwere ọdọ mmiri infinity kacha elu n'ụwa.
Onye na-ese ụkpụrụ ụlọ bụ Moshe Safdie kọwara na ihe mere ụlọ elu ahụ sitere n'ike nke kaadị. Enwere echiche dị ịtụnanya gbasara Singapore site na ọdọ mmiri infinity, n'ala nke 57. Na mgbakwunye, ị nwere ike ịmasị ọmarịcha ụlọ elu Marina Bay Sands nke sitere na Ubi nke The Bay, ebe ọzọ mara mma ileta na Singapore.
7. Ụlọ elu kacha mma n'ụwa niile: Tokyo Skytree
na 2 oche nche, skyscraper Tokyo Skytree bụ otu n'ime ụlọ elu ise kachasị elu n'ụwa. na 634 mita, ị nwere ike nweta kọfị na cafe kacha elu n'ụwa, nwere echiche dị ịtụnanya banyere Tokyo. E wuru Skytree ka ọ bụrụ ụlọ elu telivishọn na mgbasa ozi ma mesịa bụrụ nke akara ngosi kachasị mkpa na Tokyo..
Na mgbakwunye na oche nleba anya, na cafe, Ị nwere ike ịga leta aquarium na planetarium na ala ya. Ihe nleba anya na-enye 360 nlele ogo nke obodo kacha nwee ọdịnihu na nke na-atọ ụtọ na Japan, na Eshia. Nkpuru okwu, Jikere nọrọ otu ụbọchị zuru oke na-enwe mmasị na echiche na ileta ọtụtụ ụlọ ọrụ dị ịtụnanya na skyscraper Skytree Tokyo..
8. Ụlọ elu nke Canton Tower Guangzhou
China bụ ngwakọta na-adọrọ adọrọ nke oge a na oge ochie, ebe ụlọ arụsị dị ndụ n'akụkụ skyscrapers nke na-arịgoro n'ígwé ojii. One of ebe kachasị mma ileta na China bụ Guangzhou na mbara igwe Canton Tower. Na Epic 604 mita elu, A na-ahụ ụlọ elu Canton n'ebe ọ bụla na Guangzhou.
Otu n'ime ihe kachasị mma ịme na Canton Tower bụ ịnya ụgbọ ala n'elu. Ya mere, ọ bụrụ na ị naghị atụ egwu elu, bia n'abali, when the tower is illuminated with bright rainbow colors. From tram combo to a viewing deck ticket, Ileta Canton Tower bụ ahụmahụ pụtara ìhè yana karịa naanị iguzo n'okpuru agba gbadara.
9. Ụlọ Liebian International Building
Mmiri mmiri kachasị ukwuu nke mmadụ mere bụ akụkụ mara mma nke ụlọ elu kacha mara mma n'ụwa.. Liebian International skyscraper bụ 121 mita n'ogologo ya na nsụda mmiri n'elu facade ya. Mmiri mmiri kachasị elu na-enye nfuli anọ na mmiri ozuzo na ala ya. Ị nwere ike ịhụ ụlọ a dị ịrịba ama na njem gị na China, karịsịa na Guiyang, na Southwest China.
Ụlọ elu Liebian nwere ike ọ gaghị abụ nke kachasị ogologo n'ụwa, ma ọ bụ n'ezie otu n'ime n'elu 5 kasị mma skyscrapers n'ụwa.
10. Ụlọ elu kacha mma n'ụwa niile: Agbar Tower Barcelona
Torre Glories bụ nnukwu ụlọ elu dị ịrịba ama n'etiti ọtụtụ ọmarịcha ala mara mma na Barcelona. Akụkọ nke 38 144 mita skyscraper bụ ihe okike nke onye na-ese ụkpụrụ ụlọ France. Ụlọ elu ahụ mara mma nwere ọdịdị nke gyser na-arịgoro na mbara igwe ma e mere ya mgbe ugwu Montserrat gasịrị.. N'ileba anya na ị ga-achọpụta na ihe niile facade bụ nke iko.
Otú ọ dị, Ihe kacha pụta ìhè nke ụlọ elu Agbar bụ ihe na-egbuke egbuke. Ụlọ elu Spanish nwere 4,500 Ngwaọrụ LED. Ngwaọrụ LED ndị a na-egosipụta onyonyo ma nwee ike imepụta 16 nde agba. Ọzọkwa, ọ bụrụ na ị ga-aga gburugburu Ụlọ elu Agbar, ị ga-ahụ ebe a na-ekwu maka akara ala ọzọ dị ịtụnanya, Ezinụlọ Sagrada Gaudi. Ya mere, oge ọ bụla ịchọrọ ịga leta skyscraper a mara mma, dịrị njikere inwe mmasị na ya ogologo ụbọchị dum.
ebe a na Save A Train, anyị ga-enwe obi ụtọ inyere gị aka ịhazi njem na 10 kasị mma skyscrapers n'ụwa nile site ụgbọ oloko.
Ị chọrọ embed anyị blog post "10 Kasị Mma Skyscrapers n'ụwa nile" jidesie gị na saịtị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fig%2Fmost-beautiful-skyscrapers-worldwide%2F - (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)